Maalinta: Meey 18, 2020
Shirka golaha kadib, daqiiqada ugu dambeysa ee uu ka yimid Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, oo bayaan soo saaray, waxaa lagu xadiday bandoowga 81 degmo inta lagu gudajiray xafladda. 23-24-25 iyo 26 Meey 2020 (oo ay ku jiraan 23 iyo 26) [More ...]
Wuxuu ku dhashay 1970 Karamürsel. Kadib markii uu ka qalin jabiyay Dugsiga Sare ee Imam-Hatip, wuxuu waxbarashadiisa jaamacadeed ka bilaabay kulliyadda ganacsiga ee Jaamacadda Anadolu sanadkii 1989. Markii uu dhammeeyay qalin jebinta, wuxuu dhammeystiray tababarkiisa latalinta dhaqaalaha. Eskişehir Osmangazi Kuliyada Waxbarashada ee Jaamacada [More ...]
Borofisar ku takhasusay cilmibaarista jamacadda Maltepe. Dr. Afif Sıddıki iyo kooxdiisu waxay u qaabileen gole kahortaga cudurada si looga ilaaliyo daryeel bixiyayaasha daryeelka caafimaadka iyo bukaanka infekshanka iyagoo la dagaallamaya cudurka 'coronavirus'. Injineerka Jaamacadda Maltepe iyo Sayniska Dabiiciga ah [More ...]
Shirkadda xamuulka ee Turkish Cargo (THY), oo ah nooca xamuulka qaada ee Turkish Airlines, oo gaartay heerka ugu sareeya ee koritaanka 25 xamuul oo xamuul, ayaa 28-ka Maajo geyn doonta İzmir maalin walba, diyaaradna leh maalin kasta. [More ...]
Saadka Maraakiibta laga bilaabo 15-ka Maajo rarida caalamiga ee xadiidka xamuulka qaada ee laga hirgaliyay Turkiga ayaa loo bilaabay sidii qorshuhu ahaa markii ugu horeysay ee la isticmaalo Marmaray. Xubin ka tirsan guddiga loojistikada ee Mars Gökşin Günhan ayaa sheegay in safka Marmaray [More ...]
Shiinaha ayaa horey u shaaciyay inay goor hore bilaabeyso baaritaanka Covid-19. Wasaaradda Arimaha Dibadda Shiinaha SözcüSü wuxuu yiri waa goor hore in la bilaabo baaritaan ku saabsan asalka iyo faafitaanka viruska corona, kaas oo ay dileen in kabadan 300.000 oo qof oo dunida ah. [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay ku xiri doontaa degmada Mamak, oo ku taal qaybta bari ee Caasimadda, khadka tooska ah ee ANKARAY ee ka dhex shaqeeya Howlgalka Isku-xidhka Ankara (AŞTİ) iyo Dikimevi. Dikimevi-Natoyolu System Rail System Rail System (HRS) ee mashruuca "Hirgelinta [More ...]
Wasiir Karaismailoğlu, bayaankiisa, wuxuu ku fahmay gaadiid wadista waqtiga dhabta ah Nidaamka Raadinta iyo Korantada Gaadiidka (U-ETDS), kaas oo bixiya qalabka elektiroonigga ah ee alaabada, rarka iyo dhaqdhaqaaqa rakaabka ee ay qaadaan shirkadaha ka shaqeeya gaadiidka. [More ...]
Waxaan kuu diyaarinay lambarrada Tareenka TCDD Tilmaamaha Tareenka. Marka hore, waxaan kugula talineynaa inaad soo wacdo lambarka guud ee TCDD lambarka 444 8 233. Si tirada maskaxda loogu haayo, laga bilaabo 444 ilaa shaashada taleefankaaga [More ...]
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha dhaqaalaha Adil Karaismailoğlu ayaa warbixin ka siiyay warbaahinta magaalada Lapseki, halkaas oo uu uga socday xaflada lagu dhagax dhigayay dhismayaashii ugu dambeeyay biraha biriijyada biriijka Çanakkale. Karaismailoğlu wuxuu sharxayaa mashaariicda Wasaaradiisa mudada cusub, tareenka [More ...]
Qorshayaasha Teknologiyada Dekirda were waxaa markii ugu horreysay oggolaaday Wasaaradda Hawlaha Guud iyo dejinta 1997. Markii dambe, dekeddan ayaa si gaar loo leeyahay oo ay sii wadday howlihii ay ku hoos jirtay magaca Akport Port. Sannadkii 2006, [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Konya waxay sii wadaa sameynta taabsiyo u fududeynaayo taraafikada magaalada oo dhan u rogeysa maalmaha bandoowyada inay noqdaan fursado. Duqa Magaalada Konya ee Uğur İbrahim Altay, wadada ay muwaadiniintu gurigooda ku nool yihiin [More ...]
Qiyaastii 45,5 boqolkiiba wadarta dakhliyada canshuurta ee laga soo aruuriyay Turkiga ee Istanbul, Dakhliga canshuurtu wuxuu kordhay 5 boqolkiiba marka loo eego sanadkii hore. Qaybta canshuurta isticmaalka gaarka ah ee dakhliyada guud ee miisaaniyada waa 21 boqolkiiba, dakhliga canshuurta [More ...]
Duqa Magaalada Magaalada Izmir Tunç Soyer wuxuu baaray dardar gelinta howlaha shaqo ee xawaareynta laamiga ah maalmihii bandoowga la dhaqan geliyay. Soyer wuxuu kaloo siiyay war wanaagsan iyo wadada horteeda xarunta wax gadashada ee Gaziemir dhanka jihada Konak. [More ...]
Mustaqbalka Xarunta Gaadiidka Gobolka ee Turkiga
Khudbadiisa khudbad ka jeedinaysa xafladda dhameystirka dhismihii buundada 1915 ee Buundada, Madaxweyne Erdoğan wuxuu yiri, “Waxaan heysanaa mashaariic badan oo waddo, tareeno, cirka iyo badda ah oo wali socda. Marka kuwan la dhammeeyo, Turkey, [More ...]
Duqa Magaalada Caasimada Izmir Tunç Soyer ayaa dardar gelinaya howlaha wadada baaskiilka ee ka soo horjeedo cufnaanta taraafikada ee la filayo inay ku badato nidaamka caadiga ah. Soyer, oo ku safraya jidadka baaskiilkiisa si uu u baaro mashruucyada isla goobta, ayaa yidhi, "Ka dib faafitaanka faafitaanka faafitaanka ayaa yaraaday, [More ...]
Wakaaladda horumarinta Mevlana ee Jamhuuriyadda Turkey, Sharciga lambar 5449 ee ku saabsan Adeegyada Hay'adaha Horumarineed, Xeerarka Hay'adaha Horumarinta Shaqaalaha iyo Hay'adaha ku shaqada leh iyo Hay'adaha iyo Hay'adaha kale iyo Hay'adaha ku xiran Wasaaradaha No. 4 [More ...]
Naqshadeeyay oo la horumariyey iyada oo lala kaashanayo TÜBİTAK SAGE iyo ASELSAN, Qalabka Xasaasiga Aasaasiga ah ayaa lagu daray madaxa raadiyaha leysarka iyo saxnaanta ujeedooyinka bambooyinka guud. Bayaanka lagu soo dhigay akoonnada warbaahinta bulshada ee TÜBİTAK SAGE [More ...]
Wasiirka Beeraha iyo Dhirta Bekir Pakdemirli wuxuu soo saaray bayaan ku saabsan taageerooyinka lagu dabaqi karo beeraleyda adeegsada bacriminta dabiiciga iyo unugyada jirka sanadka 2019. Hadalka Wasiirka Pakdemirli waa sidan: “Waxsoosaarka dabiiciga ee carrada dalkeena [More ...]
Waxsoosaarka Korontada ayaa Berri bilaabmi doona Ilısu Dam
Turkiga, oo ah mid ka mid ah mashruuca biyo-ballaarinta ugu weyn ee Ilisu daminta korantada, oo ah kii ugu horreeyay ee lix meelood oo waaweyn loo xuso, 19-ka May Atatürk Xuska iyo Maalinta Dhallinyarada iyo Isboortiga. Iyada oo la adeegsanayo qaabka shirka fiidiyowga ee Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan [More ...]
Jadwalka Baskentray, Saldhigyada iyo Qiimaha Tigidhada
Başkentray Ankara waa mid kamid ah mashaariicda sida weyn uga qeyb qaatay safarka magaalada. Ankara-Istanbul, Ankara, Sivas iyo Ankara, Konya mashaariicda Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara [More ...]
Bandhigga Ganacsiga oo ay la socdaan Qaybinta Software-ka Maxalliga ah iyo Kuwa Qaranka ayaa Sameyn doona Shaabad
Wasiirka Ganacsiga Ruhsar Pekcan wuxuu sheegay inuu bilaabi doono carwooyin macmal ah oo loo abaabulay xaqiijinta carwooyin cusub oo loo yaqaan 'coronavirus' (Kovid-19) oo lagu qaban doono kabaha iyo carwada maqaarka ah ee "Shoedexpo" bisha Juun 1-3. [More ...]
Qalcadda Bodrum waxaa la furi doonaa dhamaadka bisha Juun, Sumela Monastery ilaa bilowga bisha Luulyo
Wasiirka Dhaqanka iyo Dalxiiska Mehmet Nuri Ersoy wuxuu sheegay in wajiga labaad ee dib u soo celinta ee ka socota Bodrum Castle ay soo dhowdahay dhamaadka, ayna qorsheynayaan inay furaan qalcadda ay booqdaan dhamaadka bisha Juun ugu dambeysay. Wasiirka Ersoy, dib u soo celinta magaalada Bodrum Castle [More ...]
Waqtiga Warbixinta Xarumaha R&D waa la kordhiyey
Xilliga gaarsiinta warbixinnada waxqabadka ee Wasaaradda Warshadaha iyo Teknolojiyada, R&D iyo xarumaha naqshadeynta iyo warbixinnada xisaabinta maaliyadeed ee shirkadaha ka jira aagaga Horumarinta Teknolojiyadda (TGB) muddo bil ah oo dheeri ah waa 30ka Juun 2020. [More ...]
Qoyska, Shaqaalaha iyo Adeegyada Bulshada Zehra Zümrüt Selçuk; Sababta oo ah mudnaanta aan siino adeegyada ku saleysan qoysaska, waxaan xaqiijinay dib ugu soo celinta 2019 carruur ah qoysaskooda sannadka 17. ” laga helay sharaxaadda. Wasaaradda oo loogu talagalay carruurta [More ...]